Guddoomiyihii hore ee Gobolka Gedo oo muqdisho ku xayiran. | Weheliye Online
Guddoomiyihii hore ee Gobolka Gedo oo muqdisho ku xayiran.
Muqdisho(Weheliye Online)-Guddoomiyihii hore ee Gobolka Gedo Cismaan Nuux Xaaji (Macalimu) oo war qoraal ah soo saaray ayaa sheegay in uu ku xiran yahay magalada Muqdisho,Baaqna u diray Ra’isul wasaare Rooble .
Cismaan Nuux Xaaji (Macalimu) ayaa xaqiijiyay in mas,uuliyiin ka tirsan Hay,adda Nabad sugida Qaran ay ka dambeyaan xayiraada la saaray , isla markaana laga hor istaagay in uu aado Gobolka Gado iyo qoyskiisa.
“Waxaa nasiib daro ah anigoo ah masuul heer Jubaland ah oo shaqo fiican lasoo qabtay dowladda, kusoo dhaweeyay gobolka ciidanka dowlada, lasoo halgamay usoo dakanoobay haykalka dowladnimo oo aan mucaarad ku ahayn nidaamka Nabad iyo Nolol in la ii ogolaan waayo in aan booqdo deegaankaygii, caruurtaydii iyo gurigii aan ku dhashay. Sababtana ma aqaan, balse kaliya waxaan ogahay inay ka dambeeyaan foolxumadaan madaxda hayada NISA,” ayuu yiri guddoomiyihii ee maamulka gobolka Gedo
Previous articleDeg Deg Roble Oo Ku Guuleystay Dorashada, Afduubka Kenya Ee Gabdhaha Somalida
Next articleFarmaajo oo xubnaha ugu badan ku leh guddiyada doorashada. Maxaa halis ah oo ka dhalan kara?